Odayaasha Cadaado oo ka horyimid heshiiskii DFS iyo Ahlu-Sunna iyo hadalkii Kheyre (daawo | dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 2, 2019 3:49 b 0
Galmudug: Maxaa weli iskeeni la’? Maxaa DFS weli u qarsoon, maxaa se Xaaf u qorsheysan? Midnimada Galmudug ma mid afka baarkiisa ah baa iyo “ninkaad degeysid, ninkaad debin u qoolaysid …” mise waa mid wax ka jiraan? Waa se maxay doorka RW Kheyre ee midnimada iyo mideynta Galmudug oo illaa iyo maanta ah mid u badan afka baarkiisa? Radio Daljir kala soco!
Taliska Boolisa Gobalka Bari oo Ganacsatadda Fariin u diray (Daawo)